musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Tom Davies Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kutanga, zita rake chairo ndi "Thomas". Isu tinokupa yakazara chinyorwa cheTom Davies Childhood Nhau, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paakange achiri mwana kusvika pakuzivikanwa.
Tom Davies Nyaya Yehuduku- Tarira Hupenyu Hwake hwepakutanga uye Rise. Chikwereti: SportsdotNet, Twitter uye SkySports
Ehe, munhu wese anoziva kuti Davies ndiye mumwe anotonhorera pakati penhabvu muChirungu nhabvu. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoona shanduro yedu yeTom Davies 'Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei kutanga neiyo yake Wiki zivo-base uye tafura yezvinhu pamberi penyaya yakazara.
Tom Davies Biography Chokwadi (Mibvunzo)
Zita rizere: Thomas Davies (Zita Chairo)
Zita rekudanwa: Tom
Zuva rekuzvarwa: 30th yaJune 1998
Nzvimbo yekuzvarirwa: Liverpool, England
Age: 21 (Kubva paFebruary 2020)
Nzvimbo yaakakurira: West Derby (East yeLiverpool, England)
Vabereki Vabereki: Daine Davies (Amai) naTony Davies (Baba)
Vanun'una: Liam Davies (Mukuru Mukoma)
Inodiwa Music Music: Kings of Leon
Chikafu chaunofarira: Pesto pasita ne parmesan chizi.
Shamwari yepamwoyo: Dominic Calvert-Lewin
kukwirira: 5 ft 11 mu (1.80 m)
Kuridza Position: Pakati wepakati
Yekutanga Nhabvu Dzidzo: Chikoro Nhabvu uye Tranmere Rovers
Tom Davies ' Nyaya Yemwana:
Tom Davies Nyaya Yehuduku- Tarisa uone zvakajeka mifananidzo yake yehudiki. Chikwereti: FPCP-BlogSpot
Kutanga, zita rake rakazara Tom "Thomas" Davies. Tom akazvarwa pazuva rechimakumi matatu raJune 30 kuna amai vake Daine Davies (murume ane vhudzi) uye baba, Tony Davies (mushandi wehurumende) muguta reLiverpool. Nyeredzi yekumusha yakakura pamwe chete nemukuru wake mukoma Liam uye pamwe chete, ivo vakarerwa nevabereki vavo muWest Derby. Kana wanga usingazive?… West Derby inzvimbo yakapfuma kumabvazuva kweLiverpool, England.
Tom Davies 'Mhuri Yemhuri:
Mhuri yaTom Davies ndeye wedzinza reLiverpool vakaberekerwa kuEngland vanotaura mutauro wechirungu. Merseyside akaberekwa ari pakati svikiro ane mhuri yake anobva Liverpool, iro rinozivikanwa UK maritime guta kuchamhembe kwakadziva kumadokero England. Iro guta rine chinonyanya kunakidza kuunganidza mamuseum muEurope. Zvakare, yaive yekutanga kuve yekutanga njanji yepasipoti njanji.
Tom Davies akakurira mumhuri yepakati-yemhuri yekumashure, aine mazhinji emhuri yake anogara achitenderera Liverpool yepasi peWest Derby. Kuve naamai avo vaibata bvudzi rekurongedza uye baba vaive tete wepakati zvinoreva kuti vese vabereki vaTom Davies vaive vakagadzikana.
Tom Davies ' Hupenyu hwepakutanga neBhora uye Dzidzo:
Achiri mudiki, vabereki vaTom Davies vakamunyoresa pachikoro chemunharaunda cheMerseyside, icho chakakurudzira vana vavo kutora nhanho yenhabvu yechikoro. Maererano ne Telegraph, mudiki Tom (akafananidzirwa pazasi) aive mwana akajeka, iye aive akanaka kwazvo kunyanya pamasvomhu nesainzi.
Thomas mudiki akatamba nhabvu kuchikoro, mune nguva apo zvikoro zveLiverpool zvaive nenyaya nenyaya dzemakirabhu anotora vadzidzi vavo vakanyanya. Chikwereti: FYC
Kare ikako, vabereki vaTom Davies vaive nemaonero ekuti mwanakomana wavo haafanire kukanganisa dzidzo yake yebhola. Vese Daine naTony vaida kuti Tom asvike padanho reUniversity. Zvinosuruvarisa, zvinhu hazvina kufamba sezvavaisashuvira-kuvonga nezveramangwana.
Simba raTom Davies 'Babamunini raive paari:
Kunyangwe hazvo dzidzo yaibata pamwe nekukosha kukuru, kuda kwaTom kune bhora kwakawedzera nekuda kwekukurudzira kubva kumunhu-mumwe. Hapana mumwe kunze kwa “sekuru vake- Alan". Waizviziva here? nhabvu majini anomhanyirawo muTom Davies 'Mhuri kuburikidza nababamunini vake vanozivikanwa, Alan Whittle. Alan (pikicha pazasi) iye anonzi Tom anofananidza akaridza kuna Everton uye Crystal Palace muma1970s.
Sangana naTom Davies Uncle, Alan Whittle- Unofungei nezvechitarisiko chavo? CREDIT: Twitter
Alan Whittle akabatsira Tom Tomies mudiki kuti ave simba rekuverengerwa muMerseyside chikoro chebhora. Kure kubva kuchikoro, Davies akatora zvaakaenda muruoko rwake sezvaaigaro gadzira hunyanzvi hwake mumunda wenhabvu weWest Derby.
Tom Davies ' Upenyu hweMabasa Ekutanga:
Tarenda yaDavies yebhora yakabuda panguva yekunetsana pakati pevadzidzi venhabvu neMerseyside chikoro chebhora. Munguva iyoyo, Merseyside chikoro masisitimu akaodza moyo yavo matarenda ekubuda mukutamba nhabvu nhabvu. Izvi zvakauya nekuti vaigara vachinzwa kusarudzika uye kuparadzaniswa.
Little Davies akabatwa nekuti aive netariro yekujoinha chikoro uye panguva imwechete, kutora chikamu munhabvu yechikoro. Paingova nesarudzo imwe chete kwaari, kungave kuti akajoina chikoro kana kuenderera mberi nhabvu yechikoro. Mukupedzisira, vabereki vaTom Davies vakamubvumidza kuti abude mubhora rechikoro kuti ajoine Tranmere Rovers academy iri muLiverpool.
Tom Davies 'Biography- Nzira Yake Yokuenda Mukurumbira:
Vanzwisisa chishuvo chemukomana wavo wekutamba nhabvu yekurarama, nhengo dzemhuri yaTom Davies kunyanya babamunini vake vakaita zvese zvavaigona kuti vatsigire zvido zvake. Ndichiri kuTranmere Rovers, Tom mudiki akatanga kuve a zvine hungwaru whiz mwana. Chimiro chake chekutamba chakakwezva Everton nhabvu academy, imwe yemakirabhu maviri echirungu makuru kubva kuLiverpool.
Mugore ra2009 aine makore gumi nematatu, Tom aive atochengetedza zita rake muTofi's academy rost mushure mekubudirira kuyedzwa nekirabhu. Inoratidzwa pazasi, yaive nguva yakachena yemufaro iye nevemhuri yake mhuri.
Mudiki uye anofara Tom mugore ra2009- Iri gore raakajoinha naOliton. Chikwereti: FPCP-Blogspot
Chokwadi chiri, tapa pakanga pasina kubudirira kwehusiku humwe mu Everton academy. Davies aifarirwa kwazvo nekuda kwekukura kwake uye hutungamiri hunhu hwaaive nahwo. Waizviziva here? Hunhu hwake nemhando yekutamba zvakamuitawo kuti ashevedzwe muEngland U16 timu yenyika mugore ra 2013. Sezvaitarisirwa, Davies akaramba achikwira nenzvimbo dzenyika, achiva mukuru wevechidiki veEngland mukuita uku.
Tom Davies 'Biography- Rise Rake Kumukurumbira Nyaya:
Kubva panguva iyo Davies akabata nyika yeEngland, kufambira mberi kwake kwaive kwakasimba netariro yekupunzika pasi paRoberto Martinez uyo anotora nzvimbo kubva David Moyes. Munguva yemwaka wa 2014-15, akasimudzira kuna Underton's Under-21s.
Pakupera kwemwaka, akasaina kontrakita yake yekutanga inyanzvi, nguva yekufara kwababamunini, vabereki uye nhengo dzemhuri. Tom Davies fomu inonakidza neAllton's U21 timu akamupa mubayiro nePremier League Dut wake nemaneja Roberto Martínez.
Wechidiki wemvere, nekuda kwehungwaru hwemumugwagwa uye mheto dzakaomesesa dzebhola dzechikoro nhabvu yakagadzwa pasina nguva. Svondo iyo ya15 Ndira 2017 inoramba iri chikamu chakakosha musi muTom Davies Biography yaaisazombokanganwa. Raive zuva raakazadzisa huroto hwake hwehucheche nekupa mubairo wake wekutanga nyanzvi kuEverton vachipesana neManchester City.
Wakafananidzirwa pazasi, Davies airatidza kudzikama kukuru mushure mekudzvanya chipikiri pamusoro pebhora pane onrushing Claudio Bravo notch yake yekutanga-yepamusoro danho chinangwa. Kuita kwake mwedzi uyo kwakamuwanira yeJanuary PFA Fans 'Mutambi weMwedzi uye Yechidiki Mutambi weWedzero.
Kuona kwenguva iyoyo isingakanganwike Thomas akafunga chinangwa chake chekutanga semutambi mukuru. CREDITS: Nguva uye DailyMail
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Tom Davies Biography, tinogona kutaura tichivimba kuti hupenyu hwake hwachinja. Iye zvirokwazvo haasi mutambi wenhabvu uye akagadzirisa kuti ave jaya rinodiwa. Tom akaenderera mberi achimiririra kirabhu yake yaanoda (Everton) makumi matanhatu neshanu pasati pemusi wekuzvarwa kwake.
Pasina kupokana, isu vateveri venhabvu tiri parutivi rwekuona imwe nhandare maestro ichipinda munzira yake yetarenda repasi rose pamberi pedu chaipo. Tom Davies zvirokwazvo ndeimwe yakanakisa pakati pemugumo wekugadzira mutsara wevadiki vanobuda muEngland. Vamwe vese, sekutaura kwedu, yave nhoroondo.
Tom Davies ndiani Musikana?
Nekusimuka kwake mukurumbira uye hunhu hwakanaka, zvine chokwadi chekuti vamwe veFeverton neEngland fan vanofanirwa kuve vakafungisisa pamusoro pekuti musikana waTom Davies angave ani. Kana angave akaroora, aine mukadzi nevana. Chokwadi ndechekuti, hapana kuramba chinhu chekuti Tom anotaridza tsvarakadenga zvaisamuita iye A-Lister zvevangangoita musikana nemukadzi zvigadzirwa. Sezvo Philippe Coutinho.
Everton neEngland Fans vakabvunza- Tom Davies Kufambidzana ndiani? Ane musikana here? kana mukadzi?. Chikwereti: IG
Mushure mekutsvaga kwakati pamusoro pe internet, tasvika pakuziva kuti Tom Davies angave asina kuroora (sep panguva yekunyora).
Tom Davies ' Hupenyu Hwega:
Kusvika pakuziva Tom Davies Hupenyu hwega. Chikwereti: Instagram
David Beckham, Thierry Henry, Andrea Pirlo vese vane chaiyo mojo apo vamwe vatambi venhabvu neimwe nzira havaiti (hapana mhosva Danny Drinkwater!. Tom Davies ndiye mumwe murume anoratidza kunyika kuti- haufanirwe kunge uri superstar mukuru kuti uve unonakidza kupora.
Kunyangwe aine Skateboards ake, vhudzi refu, zvipfeko zvevintage, anotaridzika, hunhu hwaTom pane gomba richiri kuchengetwa. Tom Davies inodzivirira kudaviro yenharaunda yakanyanya-pamusoro (Stereotype) nezvebasketball's off-pitch inotaridzika uye kugona kwavo kuve vatungamiriri. Kunyangwe nechitarisiko chake chisinganzwisisike, iye wedu chaiye Tom, pane dzinoverengeka nzvimbo akava mutungamiri pitch. Waizviziva here? Tom Davies akabata, vese vechidiki veEngland uye kunyange timu yepamusoro yeeverton.
Chekupedzisira, pahupenyu hwaTom Davies, wepakati wepakati ndiye mumwe munhu anonzwa akasununguka mune rake chimiro. Haadi kufambiswa nevamwe vanhu. Tom anotenda kuti anongoda kuve akanaka pane zvaanoita pachinzvimbo chekuomerera kune izvo vamwe vanhu (semuenzaniso; avo vanoda kuti iye apfeke masheya akareba uye ndebvudzi rake) vanoda kuti aite.
Kusvika pakuziva Tom Davies Mararamiro kubva padanho. Chikwereti: Instagram
Kusvika pakuziva Tom Davies 'Mararamiro kwaizokubatsira iwe kuti uwane mufananidzo wakazara weyekugara kwake. Kutanga, iwe unobvumirana nesu kuti ndizvo tanotonhorera nhabvu pane imwe nguva yakazara-pasirese. Sezvo panguva yekunyora, Davies haararame hupenyu hwoumbozha inonyatsooneka nemotokari dzinopenya, dzimba hombe (dzimba) nezvimwe.
Sezvacherechedzwa pamusoro, Tom kunyangwe netani yake yakakosha uye kukosha pamusika achiri kusarudza kutyaira yakagadzirirwa bhasikoro semota yake. Ichi chiratidzo chemararamiro ake ekuzvininipisa. Tom haavanzi chokwadi chekuti anotsigira FC Barcelona kunyangwe semutambi weLeverton. Anoda PlayStation koni, imwe yaanotamba nayo Dominic Calvert-Lewin (shamwari yake yepamoyo).
Tom Davies ' Hupenyu hwemhuri:
Wese muLiverpool anozvifarira kana mumwe munhu anobva muguta akaita zvakanaka, saka hazvisi chete mhuri yaTom Davies iyo inodada nezvaakaita. Vanhu vanobva kuguta reLiverpool vanonzwa kushushikana kana vaona yavo chaiyo vachiita zvakanaka. Iyi yazvino mienzaniso ndeiyi; John Lundstram uye Chris Wilder vari kugadzira musoro muChirungu nhabvu. Muchikamu chino, tinokanda kujeka pahupenyu hwemhuri, takatarisa nemumwe wevabereki vaTom Davies- mai vake.
Zvimwe nezvaTom Davies 'Mum:
Daine Davies ndiye ane mukurumbira bvudzi muLiverpool uye super mum waTom Davies. Daine ndiye mhando yamai anofarira kushamwaridzana nemwanakomana wake. Davies akaudza Daily Mail kuti kumashure kudzidzo yake, amai vake havanetseki nekuchengeta vhudzi rake rekuvharwa kwebvudzi rakavharwa kuitira kuti aende naye kuFinch Farm (Everton FC yekudzidzira pasi. Izvi zvakaitika kunyangwe iye aive mutambi mukuru asi aive asati apfuura test yake yekutyaira. Mukubvunzana, Davies akambotaura izvi pamusoro paamai vake;
"Mai vangu vanondiunza mangwanani ega ega uye vanondidhonzera kure, ”Akadaro Davies, aine girini rakakura kumeso kwake. Paakabvunzwa kana aisekwa nevaaibata navo Tofu, akazopindura achiti: "Ehe, asi ini hapana chandinoona chakashata nazvo!"
Zvimwe Zvakawanda Pamusoro paTom Davies 'Baba:
Tony Davies ndiye akanakisa baba vaTom. Iye rudzi rwababa vanonakidzwa nekuva nemwanakomana wavo Davies vakamutenderedza uko ivo vaviri vanoona mitambo yake pamwechete. Maererano ne teregirafu, Davies akambotaura kuti mushure mekutanga rake rebasa chinangwa, akaenda kumhuri yake kumusha kuti anoona mutambo pamwe nababa vake vepamusoro (Tony). Vese baba nemwanakomana vakavaka hukama hwakanaka, hune hwakagadzirirwa kuti hurambe huripo.
About Tom Davies 'Mukoma- Liam:
Vabereki vaTom Davies vaisave naye semwana wavo mumwechete. Yechirungu inokwira nhabvu ine mukoma mukuru anoenda nezita Liam Davies. Tom Davies 'mukoma saiyewo akapindawo mumitambo. Sekureva kweWikipedia, Liam isusu-nyanzvi bhora bhora anotamba Curzon Ashton. Mumwe mushumo unazvo unoreva kuti Liam anoshongedza zvakare Chef uyo anobika marudzi ese ezvikafu newaanofarira kuve pesto pasita ne parmesan tchizi.
Pamusoro paTom Davies 'Sekuru:
Sangana naTom Davies 'Sekuru, Alan Whittle- Unofungei nezvechitarisiko chavo?
Alan Whittle ndibabamunini vaTom, iye watakati ndiye anokanganisa basa raDavies, kumuita kuti ave nani semutambi. Sezvineiwo, Tom Davies ndiye muzukuru weaimbove mutambi weOllton uyo akaoneka ka74 nechikwata ichi pakati pa1967 na1972.
Tom Davies ' Chokwadi:
Muchikamu chino chaTom Davies Biography, tichakuratidza zvimwe zvinhu zvisinga verengeki nezve Liverpool yakazvarwa uye West Derby bred nhabvu.
Chokwadi: 1- Tom Davies Mari Yemubhadharo Yekuputsa mumasekondi:
Muchikamu chekutanga cha2019, mutambi weChirungu akasainirana chibvumirano neOverton, icho chine mubairo wehomwe wemitero miriyoni 1,293,684 (Million Pound) pagore. Kumwaya Tom Davies mihoro kuti uwane mibairo pamasekondi, miniti, awa, zuva, nezvimwe,… isu tinotevera;
Tom Davies 'Mari Yemubhadharo muPound (£)
Tom Davies 'Mari Yemubhadharo muEuro (€)
Tom Davies 'Mari Yemubhadharo Mugore £ 1,293,684 € 1,500,000
Tom Davies 'Mari Yemubhadharo Pamwedzi £ 107,807 € 125,000
Tom Davies 'Mari Yemari Yekutora Pa Vhiki £ 26,294 € 30,488
Tom Davies 'Mari Yemubhadharo Zuva Rese £ 3,534 € 4,098
Tom Davies 'Mari Yemari Yekutora Paawa £ 147 € 171
Tom Davies 'Mari Yemubhadharo Pam Minute £ 2.45 € 2.85
Tom Davies 'Mari Yemubhadharo Pamasekondi £ 0.04 € 0.05
Uku ndiko kuwanda kwemari yakaitwa naTom Davies kubva pawakatanga kuona peji ino.
Kana izvo zvaunoona pamusoro zvichiri kuverenga (0), saka zvinoreva kuti urikuona AMP peji. ikozvino Click HERE kuti awone muhoro wake kuwedzerwa nemasekondi. Waizviziva here? Wepakati murume muUK anofanira kushanda kweanosvika 3.6 makore kuti awane mari £ 107,807, iyo iyo huwandu hunowanikwa naTom Davies mumwedzi mumwe chete.
Chokwadi # 2- Pamusoro paTom Davies Bvudzi:
Icho chikonzero chiri shure kwaTom Davies 'Bvudzi. Chikwereti: SB-Nyika, Zimbo uye EvertonFC
Pasina kupokana, bvudzi rake refu rakapusa rinomuita kuti azive ipapo pacho. Iyo nyaya yekuti mitezo yemhuri yaTom Davies inosimbisa bvudzi rake yakambopa iye wechidiki mubhokisi wake zvese mabira kuti aibvise. Izvi imhaka yekuti akafunga kuti bvudzi rakabva kuna Daine, mai vake, uye vhudzi. David Unsworth [murairidzi weWeverton Under-23s] aigara achipa Davies zvimiti zvetsvimbo nekuda kwebvudzi rake, aigara achimuudza kuti azvigure. Paakabvunzwa nezvebvudzi rake, Tom akamboti;
“Ndakatanga kukura bvudzi rangu makore mashoma kumashure, ndobva ndaribvisa. Ndakangoerekana ndatanga kuzvishayisa, saka ndinofanira kuzvidzosera. ”
Mutambi wenhabvu wenhabvu akataura kuti vachiri kubvuma kusapindirana kuti mai vake, Diane, ndebvudzi.
Chokwadi # 3- Nei Tom Davies akapfeka zvipfupi Masokisi:
Tinokutaurireiko kuti wepakati wepakati vanopfeka zvipfupi masheya ?. Chikwereti: Zimbo
Kubva bvudzi rake kusvika kune yakange isina kuveurwa nduru uyezve kune yake pfupi masokisi, Tom Davies anotora fungidziro yemunhu akasununguka-ane mweya wakasununguka. Waizviziva here? Chikoro chaTom chekare, masokisi akapfeka zvakaderera anomutsa nostalgic kutaurwa kuna sekuru vake, Alan Whittle. Ehe, anoita izvozvo kukudza babamunini Alan Whittle uyo aimbopfeka zvipfupi nguva yavo panguva yavo kuOllton. Parizvino, vazhinji havafungi chete Tom, asi vamwe vatambi venhabvu vakaita Jack Grealish atypical nekuda kwekufunga kwavo kutora toti masokisi mune shin mapads.
Fact # 5- Tom Davies FIFA Ratings:
Davies at 21 (kubva paFeb 2020) ine mukana wekuve mumwe weakanakisa maChirungu ma midfielders muFIFA. Wepakati wepakati ane FIFA angangoita makumi masere neshanu, zvichimuita mutengi wekutengera FIFA basa modhi vanoda.
Wepakati wepakati ane FIFA Yakakodzera Inogona, zvirokwazvo imwe yeramangwana. Chikwereti: SoFIFA
Chokwadi # 6 Tom Davies Matipi:
Tom panguva yekunyora haatendi mune Tattoo tsika iyo inozivikanwa kwazvo mumazuva ano emitambo. Inoratidzwa pazasi, iye ari wepakati haadi ma inks mumuviri wake wepamusoro uye wepasi kuratidza chitendero chake, zvinhu zvaanoda kana nhengo dzemhuri.
Wedu chaiye Tomasi haana (panguva yekunyora) anotenda maTattoos. Chikwereti: Instagram
Chokwadi # 7 Tom Davies Chitendero:
Tom Davies 'chaiye zita ”Thomas”Izita rinobva muBhaibheri. Kuve nezita iri kunoreva kuti vabereki vaTom Davies vanogona kunge vari maKristu. Panguva yekunyora, hapana chero chiratidzo chekuti Tom yakakura pachinamato. Nekudaro, tichakugadzirisa iwe nekukurumidza kana paine kuvapo kwechiratidzo chemufananidzo chinoratidza chiitiko chake chechikristu.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Tom Davies Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Andros Townsend Childhood Nyaya Yekuwedzera Plus Untold Biography Facts